I-Wholesale RGB Gamer Desk enemodeli yesilawuli kude ye-ZA Umkhiqizi Nomhlinzeki |I-TwoBlow
Ubukhulu bomkhiqizo:120 x60x75cm;22 kg
Okubalulekile:Ibhodi Lezinhlayiya, Insimbi, Ipulasitiki
Isisindo Sento:awu 22kg
• Indawo yokudlala enkulu: ubukhulu bubonke buyi-120*60*75cm(47.5*23.8*29.6 inch).Nge-carbon fibre laminated top, ideskithophu ayinamanzi, ayikwazi nokuklwebheka, ayikwazi ukumelana nokushisa futhi inokwakheka okuhle.Ideskithophu yinde futhi ibanzi ngokwanele ukuthi ingamamonitha ama-2 neminye imidlalo eminingi, umsebenzi noma izinto zokufunda.
• Ukukhanyisa kwe-RGB enamandla: ideski lemidlalo linikeza idizayini e-ergonomic kanye nobubanzi obukhulu obunemiphumela ekhazimulayo yokukhanya kwe-RGB ukuze kuthuthukiswe umuzwa wakho wegeyimu owedlulele.Ngokulawula okukude kokhiye abangu-17 kumamodi okukhanyisa amaningi: imibala eyodwa engu-6, ukushintsha kombala owodwa okungu-6, ukushintsha kokukhanya kwe-RGB nokukhanya kweflashi.
• Ukwakhiwa kohlaka lwe-Z oluzinzile nokumelana namadwala: ideski lemidlalo lenziwe ngemilenze yefreyimu yensimbi yekhwalithi ephezulu, eqinile futhi ingasekela isisindo esiphezulu esingafika ku-30 ​​kg.Ideskithophu ewugqinsi (18mm) kanye nohlaka lwensimbi olumise okwe-Z kuqinisekisa ukuqina namandla.Izinyawo ezilinganayo zigcina ideski lizinzile, kukhaphethi noma ngokhuni oluqinile.
• Izici zabadlali bamageyimu: leli thebula lomdlali linesilawuli kude, into yokubamba isiphuzo, ihuku ye-headphone, izimbobo ezi-2 zemikhombandlela yekhebula kanye nesibambi sesokhethi igcina izinto zihlelekile.Akulona nje ideski lokudlala, kodwa futhi indawo yokusebenza enemisebenzi eminingi.
• Umhlangano owenziwe lula: Ukwenza ukuhlanganiswa kwaleli thebula legeyimu eliqinile kube lula ngangokunokwenzeka, sifake imiyalelo ecacile neningiliziwe (ulimi lwesiNgisi aluqinisekisiwe), izingxenye ezinezinombolo nawo wonke amathuluzi adingekayo.
I-Controllable RGB fibre optical lighting
IYAKHELWE ABADLALI: Iphaneli yedeski lemidlalo ye-TwoBlow ifakwe izibani ze-fiberglass RGB LED futhi idala indawo yokudlala ehlaba umxhwele.Izinto zekhwalithi ephezulu kakhulu: I-Optical core material, embozwe ngepulasitiki yobuchwepheshe ekwazi ukumelana nelangabi enamandla amakhulu, engaqinisekisa ukuthi isikhathi eside azikho izinkinga zekhwalithi njengokuphuka nokuguquka.Izinketho zamamodi okukhanyisa amaningi: Ngesilawuli kude sokhiye abangu-17: imibala eyodwa engu-6, ukuguqulwa kombala ngamunye okungu-6, ukuguqulwa kokukhanya kwe-RGB kanye nokukhanyisa kwe-flash.Ikhwalithi eqhubekayo: Ngendawo ye-carbon fiber kanye nokukhanya kwe-RGB ye-LED ukuveza ubunikazi bomdlali wakho, i-TwoBlow isezingeni lokuqala ngaphakathi nangaphandle.Ungashintshela kalula emiphumeleni eminingi yokukhanya ngokusebenzisa isilawuli ukuze uthole ulwazi olungcono lwegeyimu.
Idizayini ecatshangelwayo, sebenzisa isikhala ngendlela efanele futhi elungele ukudlala noma nini.
Isiphathi seziphuzo esiqinile sinikeza indawo yeziphuzo.Gxila emdlalweni futhi ungakhathazeki ngokuvuza kwamanzi.
Uhlelo oludidiyelwe lokuphatha ikhebula
Ngokunikeza isikhala sesokhethi yakho ohlakeni lokuphatha, ideskithophu yekhompyutha yokudlala ye-ESGAMING isusa ubungozi bamasokhethi aphansi.
Ideski lemidlalo ye-ESGAMING linezinyawo ezine zokulinganisa ezilungiseka ukuphakama ezingamisa ideski futhi zivikele ukuntengantenga.
Imbobo yomhlahlandlela wekhebula
Ngezimbobo zomhlahlandlela wekhebula ezingu-2 kwesokunxele nakwesokudla, zilungele ukufakwa kwekhebula.
I-carbon fiber surface
Idizayini ye-Carbon fibre egqugquzelwe yizimoto zesitulo somjaho.Sicabanga ukuthi ingabonisa ubunikazi bomdlali wakho.
17 key isilawuli kude
Ideski lemidlalo liza nokukhanyisa kwe-RGB LED kanye nesilawuli kude.Ungashintshela kalula emiphumeleni eminingi yokukhanya ngokusebenzisa isilawuli ukuze uthole ulwazi olungcono lwegeyimu.
Imilenze eqinile futhi ezinzile ingabamba umthamo womthwalo ofinyelela ku-100 kg
Okwedlule: Ithebula lokudlala eline-Z Shape Legs Model FM-Z
Olandelayo: Ithebula le-Gamer elingu-140cm elinemilenze ye-T shpe ne-model pad Model LY 140cm